Sidee Shirkadda ECCO ula wareegtay mid ka mida shaqadii Dowladda Hoose ee Muqdisho.? - Caasimada Online
Home Warar Sidee Shirkadda ECCO ula wareegtay mid ka mida shaqadii Dowladda Hoose ee...
Sidee Shirkadda ECCO ula wareegtay mid ka mida shaqadii Dowladda Hoose ee Muqdisho.?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Nadaafadda waxay ka mid tahay adeegyada asaasiga ah ee ka qeyb qaata caafimaadka iyo faya-dhowrka, waxaana muddo dheer maareynta qashinka magaalada Muqdisho uu ahaa shaqooyinka ugu waaweyn ee Dowladda Hoose ee Muqdisho.
Shirkadda ECCO waxay lacagteeda si toos uga soo saarataa dadweynaha Muqdisho oo lacag ay uga qaadato qashinka, iyadoo Maamulka Gobolka Banaadir oo ay ahayd inuu adeegan qabto uu isna canshuur ka qaado dadka, taasoo isugu tageysa in dadka Muqdisho ay laba jeer dhibanayaal yihiin laakiin ay raali ku yihiin.
ECCO waxay hadda dadaal ugu jirtaa inay la wareegto xarumihii dowladda Hoose iyo dhulkii danta guud ahaa oo ay ugu dambeysay Barxadda Ceelgaab ee Biyaaso Liibaro oo hadda la isku hayo kadib markii la siiyey si ay ugu shaqeysato.